Boost for Zim coffee production - DailyNews Live
Boost for Zim coffee production
John Kachembere • 7 September 2018 5:37PM • 0 comments
HARARE - South Africa’s Nespresso yesterday announced a long-term investment plan to revive Zimbabwe’s coffee industry and stimulate the rural economy.
The company — a world leader in coffee machines, capsules and coffee accessories — will provide training and technical assistance to 400 smallholder coffee farmers over the next five years, with the goal of increasing the country’s production of quality sustainable coffee.
Zimbabwe’s coffee sector is in danger of disappearing as the result of a sharp decline in production over the past 18 years, following a series of economic shocks affecting many of the country’s agricultural industries.
Nespresso expects to buy more than 95 percent of the high quality coffee production of Zimbabwean smallholders this season.
The coffee will be available to global consumers in 2019.
Nespresso chief executive Jean-Marc Duvoisin said the company is already working with farmers for the next harvest, where it expects volumes to increase, marking a potential turning point for Zimbabwe’s coffee producers.
“Zimbabwe has a long history of producing beautiful coffees and we are pleased to be working with farmers through our AAA Sustainable Quality Programme to help bring this industry back to life,” he said.
“We are honoured to partner with Nespresso and the farmers of Zimbabwe to help transform one of the country’s most promising sectors and share more of its incredible coffee with the world,” said TechnoServe President and chief executive William Warshauer.